မြူးကြွတဲ့ သံစဥ်တွေကြား ဗိုက်ကြီးသည်ပုံနဲ့ အခွီတွေ ခုန်ပေါက် ကနေတဲ့ ဖြူဖြူထွေးရဲ့ ဟာသ ဗီဒီယိုဖိုင်လေး – Real Link
မြူးကြွတဲ့ သံစဥ်တွေကြား ဗိုက်ကြီးသည်ပုံနဲ့ အခွီတွေ ခုန်ပေါက် ကနေတဲ့ ဖြူဖြူထွေးရဲ့ ဟာသ ဗီဒီယိုဖိုင်လေး
ပရိတ်သတ်ကြီး ရေ ဖြူဖြူထွေး ကတော့ နာမည်လေးနဲ့ လိုက်အောင် စိတ်သဘော ထားကောင်းပြီး အလှူတန်း ရက်ရောသူ လေး ဖြစ်ပြီး ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှု တွေကြားက နေ အနုပညာလောက မှာ နေရာတစ်နေရာ ရရှိအောင် ကြိုးစားလာခဲ့တဲ့ ဖြူဖြူထွေး က အခုဆိုရင် အားလုံး ရဲ့ အသိအမှတ် ပြု အားပေးခြင်း ကိုရရှိနေ ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ မိဘအပေါ်မှာလည်း သိတတ်လွန်းတဲ့ ဖြူဖြူထွေး ကတော့ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပိုမိုအောင်မြင်လာ နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်…. ။
ဖြူဖြူထွေး ကတော့ သူမ ရရှိလာ တဲ့ အနုပညာကြေးလေး တွေကိုလည်း မကြာခဏ ဆိုသလို လိုအပ်သူတွေ ကို တတ်နိုင် သလောက် လှူဒါန်းလေ့ ရှိသူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူမရဲ့ ပင်ကိုယ်ဟာသ စွမ်းရည်နဲ့ အကဗီဒီ ယိုလေးတွေ ကြောင့်လည်း လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာပေါ် တွင် ပိုမိုရေပန်းစား လူကြိုက်များလာကာ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို အခိုင်မာရရှိသူ လည်း ဖြစ်ပါတယ်နော်။
ယခုလည်းပဲ ဗိုက်ကြီးသည်ပုံစံကြီးလုပ်ကာ မြူးကြွတဲ့သံစဥ် တွေနဲ့အပီအပြင်က ခုန်နေတဲ့ ဟာသဗီဒီယို လေး ကို ဖော်ပြထားပါ တယ်။ သူမရဲ့ ဟာသဗီဒီယို လေးတွေဟာ ပရိတ်သတ်တွေကို အမြဲတမ်လိုလို ရယ်မောပျော်ရွှင်စေခဲ့ တာကြောင့်လည်း ပဲ ကြည့်ရှုအား ပေးသူတွေ များနေခဲ့ တာပါနော်။
ပရိသတ်ကြီး အတွက် ဖြူဖြူထွေး ရဲ့ ဟာသဗွီဒီယိုလေး ကို ပြန်လည်မျှဝေပေး လိုက်ပါတယ် နော်။
ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ ျဖဴျဖဴေထြး ကေတာ့ နာမည္ေလးနဲ႔ လိုက္ေအာင္ စိတ္သေဘာထားေကာင္းၿပီး အလႉတန္း ရက္ေရာသူေလး ျဖစ္ၿပီး ေဝဖန္တိုက္ခိုက္မႈ ေတြၾကားက ေန အႏုပညာေလာက မွာ ေနရာတစ္ေနရာ ရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားလာခဲ့တဲ့ ျဖဴျဖဴေထြး က အခုဆိုရင္ အားလုံး ရဲ့ အသိအမွတ္ ျပဳ အားေပးျခင္း ကိုရရွိေန ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ မိဘအေပၚမွာလည္း သိတတ္လြန္းတဲ့ ျဖဴျဖဴေထြး ကေတာ့ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ပိုမိုေအာင္ျမင္လာ ေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္…. ။
ျဖဴျဖဴေထြး ကေတာ့ သူမ ရရွိလာ တဲ့ အႏုပညာေၾကးေလး ေတြကိုလည္း မၾကာခဏ ဆိုသလို လိုအပ္သူေတြ ကို တတ္နိုင္ သေလာက္ လႉဒါန္းေလ့ ရွိသူေလးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သူမရဲ့ ပင္ကိုယ္ဟာသ စြမ္းရည္နဲ႔ အကဗီဒီ ယိုေလးေတြ ေၾကာင့္လည္း လူမႈကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာေပၚ တြင္ ပိုမိုေရပန္းစား လူႀကိဳက္မ်ားလာကာ ပရိသတ္ေတြရဲ့ အားေပးမႈကို အခိုင္မာရရွိသူ လည္း ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။
ယခုလည္းပဲ ဗိုက္ႀကီးသည္ပုံစံႀကီးလုပ္ကာ ျမဴးႂကြတဲ့သံစဥ္ ေတြနဲ႔အပီအျပင္က ခုန္ေနတဲ့ ဟာသဗီဒီယို ေလး ကို ေဖာ္ျပထားပါ တယ္။ သူမရဲ့ ဟာသဗီဒီယို ေလးေတြဟာ ပရိတ္သတ္ေတြကို အျမဲတမ္လိုလို ရယ္ေမာေပ်ာ္ရႊင္ေစခဲ့ တာေၾကာင့္လည္း ပဲ ၾကည့္ရႈအား ေပးသူေတြ မ်ားေနခဲ့တာ ပါေနာ္ ။ ပရိသတ္ႀကီး အတြက္ ျဖဴျဖဴေထြး ရဲ့ ဟာသဗြီဒီယိုေလး ကို ျပန္လည္မၽွေဝေပး လိုက္ပါတယ္ ေနာ္။
Previous post ပုရိသတွေ မှင်သက်သွားစေမယ့် အမိုက်စား ကောက်ကြောင်း အလှတွေ ပြလိုက်တဲ့ သင်ဇာရဲ့ ဗီဒီယို ဖိုင်
Next post လုံးဝန်းကျစ်လစ် ပြီး အပိုအလို မရှိ လှပလွန်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ချောကလျာ